Pedalampenet - A generalist Christian blog. Tsvaga zvese zvemunhu wese
Mota / mudhudhudhu / chifukidziro
Zvipo Kurume 8
Pokugara felix mabhawa
Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Hotels
Mapikicha / mavhidhiyo makamera
Watches / zvishongo
Real estate masangano
Dzimba dziri kutengeswa
Kudya hakuna kusimba
Yese inosanganisa nzvimbo
Mineti yekupedzisira inopa
Art / tsika
Chinyorwa che 30+ monetizable zvekuzvivaraidza 2021
Posted by arun feb. 4, 2021
Heino runyorwa rwekuzvivaraidza izvo zvinogona kuitwa mari uye kuyedzwa muna 2021. Kana iwe usati uine hobby parizvino, inguva yekusarudza kubva pane ino zana+ runyorwa rwezvishuwo zvaunogona kuita mari muna 100 kana gare gare. Zvimwe zveizvi zvekuvaraidza zvakaedzwa neni uye zvinoshanda 100%. Izvo zvinodikanwa kuti upe rinenge 1 awa pazuva kwavari kuti vakwanise kuzviita mari mune angangoita matatu makore.
Ndiri kuda bhizinesi rinondishandira
Posted by arun pane ian. 6, 2021
"Ndiratidze urikutsvaga paGoogle kuti ndikuudze kana uchibudirira" Cristi Onetiu Mukutaurirana pakati paGeorge Buhnici naCristi Onetiu, kuDGLCC Cristi akati anoda nhoroondo yekutsvaga kwako pagoogle uye ichi ndicho chiratidzo kana ukabudirira zvaunoda. Iwe unoona kuti kana iwe uchida bhizinesi rinokushandira iwe uye kana iwe ukatsvaga chimwe chinhu pane google iwe zvakajeka hauzobudirire. Ndiyo mhinduro kune chirevo "isu ndizvo zvatinofunga", izvo zvatinofunga ndiwo mazwi atinotsvaga paGoogle kana paInternet, isu tiri maLinks atinotevera, isu tiri mabhuku atinoverenga. Covid yakachinja isu zvakanyanya. Vanhu vazhinji vakarasikirwa nemabasa, kuzvisarudzira mudzimba dzavo ... Tinongofanira kuchinjira kune izvo zvitsva zvinodiwa. Tinofanira kukumbira chimwe chinhu chakasiyana zvachose nedenga. Isu tine kugona kutarisa kune ramangwana, tichitarisa uye nekutora zvinhu zvekare. Tinofanira kuona zvakakosha uye zvakakosha kune ramangwana. Zvinotaridza kuti hupenyu hunorova firimu uye sci-fi yazova yechokwadi kune imwe nhanho. Kutarisa kune ramangwana mu2020 hakufanirwe kutityisa. Basa Hatifanire kungoerekana tapinda muhupenyu muchirongwa chemaawa masere uye nekudaro tinorega basa. Tinofanira kuzviona isu pachedu tichishanda hupenyu hwedu hwese uye tichirota mazano kubva paudiki (ona celine dion uyo akarota zvekuve nemukurumbira pazera re8 uye muTV show anopindura kuti haana kushamiswa nekubudirira kwake nekuti pa ...
Unoda here makosi ekuvandudza wega?
Posted by Paul Gavris pane ian. 5, 2021
Mhoro shamwari! Ndakaramba ndichifunga mupfungwa dzangu mazuva ano: "Tinonyatsoda here makosi ekuvandudza wega?", Uye kana zvirizvo, "Tinoziva sei kuti makosi erudzii akatinakira?" Zviitiko zvekusimudzira zvega. uye mashandiro ainoita kwauri? Ndedzipi nzira dzekusimudzira dzevanhu uye ungadzishandisa sei? BHUKU RAKAKOSHA PAKUDZIDZA PAMunhuTinozvikurudzira sei munguva dzakaomesesa? Sei budiriro
Vimba nebhizinesi zano
Posted by arun pane ian. 5, 2021
Iyo nharaunda inotipa akawanda akabudirira mabhizinesi mazano. Seshiri isingadonhe kubva pagumbo nekuti inovimba nemapapiro ayo kwete gumbo, muzvinabhizimusi anofanirwa kuvimba nezano rake rebhizinesi. Kana iwe ukabvunza bhizinesi rako zano kana iwe ukati iwe unosiya chirongwa kana chikasashanda nemusi x, urikungozvinyengedza kuti iwe uchabudirira. Kubudirira kubudirira ...
Recent Posts Kubva All Categories
Mikova yemukati yemapuranga akakwana imba
apr. 8Posted by Alina Ileana in Imba nebindu
Mikova ndiyo inotsanangura imba. Kunyangwe vari mikova yemukati kana ...
Sureanu ski chikoro ichakudzidzisa iwe kutsika zvakanaka
apr. 8Posted by Alina Ileana in Hutano, mutambo
Isu tiri timu yehunyanzvi Sureanu ski varairidzi. Tiri ...
Izvo zvese nezve periodontitis
apr. 8Posted by Alina Ileana in Hutano
Periodontal chirwere inonziwo periodontitis. Iyi periodontitis ndeye ...
Dacia Chitubu VS BMW i3 .Maviri akakodzera mota dzemagetsi
apr. 8Posted by Alina Ileana in Mota / mudhudhudhu / chifukidziro
Motokari dzakashanduka zvakanyanya mumakore achangopfuura. Vakatanga kuzivikanwa ...
Fenzi dzakakodzera kwazvo ndidzo dzekongiri
Konkrete fenzi ndiyo inoshanda zvakanyanya uyezve inonyanyisa kupokana mu ...
Maitiro ekuona kuchengetedzwa kwako pabasa nemidziyo chaiyo
apr. 1Posted by Alina Ileana in Services
Kudzivirirwa kubasa kunovimbiswa nemamiriro ekushanda ...
Tsvaga iyo yekuisa mapepa iwe aunoda
Kurongedza kwakaringana kunofanirwa kuchengetedza chigadzirwa chako chisina kugadzikana ...
Kofi capsules inowanzotsvakwa
mart. 31Posted by Alina Ileana in chikafu
Zuva rakanaka rinotanga nekofi yakanaka. Kofi inowedzera simba kuzuva ...
Chikafu chembwa chinofanira kunge chiine mapuroteni mazhinji
Imbwa ishamwari yepamwoyo yemunhu. Ivo chete ndivo vanogona ...
PaBeKid.ro ini ndichagara ndichifarira zvigaro zvemotokari zvakakwana zvemwana wangu
mart. 31Posted by Alina Ileana in fashoni
Macheya emota ndiwo akakodzera kwazvo kana iwe uchida kuenda ne ...
Ita Zvimwe Zvinyorwa
Muchato wemufananidzo Cluj
Izvo zvese nezvemabhasikoro
Iva munyori pane ino saiti
Vanyori Vedu Vepamusoro
arun la Une zvaunofarira here? monetize it, ndinokudzidzisa mahara
Simona la Une zvaunofarira here? monetize it, ndinokudzidzisa mahara
Ionut la Kofi capsules inowanzotsvakwa
Vivien la Maitiro ekuona kuchengetedzwa kwako pabasa nemidziyo chaiyo
اسکیت la Maitiro ekuona kuchengetedzwa kwako pabasa nemidziyo chaiyo
Lawrence la Maitiro ekuona kuchengetedzwa kwako pabasa nemidziyo chaiyo
خرید بک لینک la Maitiro ekuona kuchengetedzwa kwako pabasa nemidziyo chaiyo
Bogdan la Ipa yemahara SEO yekushambadzira
Karenda yeOrthodox 2021
Bolt chikafu chinoshanda
udza mashoko Linkedin Cristian
Kero: Cluj-Napoca 400423 RO
rikagadzirwa naka Themes | Powered by WordPress